परीक्षण किट सकियो : थर्मल गनले तापक्रम जाँचेका भरमा घर पठाइयो !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/परीक्षण किट सकियो : थर्मल गनले तापक्रम जाँचेका भरमा घर पठाइयो !!!
Corona (COVID-19) UpdatesLifestyle/ Health
बन्दा`बन्दी`का सम`यमा भारत लगायत विदेश`बाट आई क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुलाई थर्म`ल गन बाट जाँचे`का भरमा घर पठाइएको छ । प्युठान जिल्ला`मा सोमबार देखि किट सकिए पछि थर्मल गनले ताप`क्रम जाँच गरी ११२ जनालाई मङ्ग`लबार घर पठा`इएको हो ।
जिल्ला`भरबाट १३७ जनालाई पन्ध्र दिनको क्वारेन्टाइन बसाइ पूरा गरी घर फिर्ता गर्नु`पर्ने थियो । किटको अभावका कारण केही स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमै राख्ने र केही स्थानीय तहले थर्मल गनका भरमा घर फिर्ता गरेका हुन् ।
“सामान्य लक्षणहरु पनि नदेखिएका कारण सामान्य परीक्षणबाटै घर पठाइएका छौँ”, श्रेष्ठले भने, “एक हप्ता सम्म परिवार, समुदाय, स्थानीय जन-प्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी रहन्छ ।” उनका अनुसार होम क्वारे`न्टाइनमा अनिवार्य बस्नु`पर्ने शर्तमा मञ्जूर भएपछि मात्रै क्वारेन्टाइनबाट पठाउने गरिएको छ ।
किटका अभावमा थर्मल गनले स्वास्थ्य जाँच गरी स्व`र्गद्वारी नगरपालिकाले ७७, गौ`मुखी गाउँपालिकाले १८ र सरु`मारानी गाउँ`पालिकाले १७ जना घर पठाएका छन् । क्वारेन्टाइनमा पन्ध्र दिनको बसाइ पूरा गरेका २१ जना भने फर्किन पाएका छैनन् ।
प्युठान नगर`पालिकामा रहेका पाँच, नौबिहनी गाउँपालिका दुई, माण्डवी गाउँपालिकाका १० र मल्लरानी गाउँपालिकामा चार जनालाई एक हप्ताभित्र किट आउने आशामा क्वारेन्टाइनमै राखिएको नगर पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए ।जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा मंगलबार सम्म ९९५ छन् । तीमध्ये बुधबार ४५ र बिहीबार १५३ जनाको चौध दिन बसाइ पूरा गरी पन्ध्र दिन पूरा हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।